Umhla My Pet » Kutheni Girls Tall Umhla Guys emifutshane
ukubuyekezwa: Feb. 13 2020 | 2 min ukufunda
Ngubani khona owakha yomhla intombazana bade kunathi okanye ukugonwa mfutshane kubo? Ingaba ihambe njani? Ngaba kunzima okanye bekhululekile nje? Lo mba sele intsonkothe ​​umbono ukuthandana umzuzwana ngoku, njengokuba abanye bakholelwa ukuba abantu abafanele amantombazana umhla bade kunathi okanye guys mfutshane kubo. Lixesha eliphezulu le ngcamango ke demystified ngobunyani!
Kulungile, ukuze mhlawumbi oko uzive bit neentloni ngokugoba ukuncamisa mfo ngubani mfutshane ekubeni abalukholelwayo ukuba guys kufuneka ukuba mde? Kodwa ngaba ukuba ulawulo phi? Ngaba oko kuthetha ukuba guys mfutshane namantombazana abade akufuneki ukuthandana kuba imithetho siganeko ukuthandana?
Kuthekani ukuba le ntombazana omde uthanda guy elifutshane vice versa? Yonke kufanele ubilise phantsi esizithandayo njengoko kukho abaya bakhetha amantombazana kunye nolwe guys elifutshane, yikholwe okanye hayi! Yaye abantu abanjalo baya kuhamba naye ukuthandana yabo, nokuba abanye bathi.
Logama nje bakholisekile ukuphakama omnye nomnye umfana nentombazana, ke akukho namnye umntu unelungelo bazame ukunyanzelisa izimvo zabo phezu kwabo. Kuyimfuneko ukuba le ngcamango demystified njengoko abanye nangoku bathi ukuba kube lula xa kuthethwa kunokuba kwenziwe, esongeza ukuba guys zilungiselelwe ukuba kusoloko ubemde amantombazana, kwaye uya kusoloko neentloni ukuba elifutshane.
Kuthiwa guys akayi ukuba izimvo ngayo, kodwa amanye amavandlakanya zenza uya kubhenca ukuba andiyithandi bona le ntombazana omde. Akuzange kubekho into enomtsalane malunga elime kukungazithembi malunga ngokwabo.
Self-ukuzithemba usoloko idlala indima enkulu kwiimeko ezinjalo. Kuba nabo ukuba umhla, ke guys mfutshane kufuneka nentembelo kulusu abo yaye musani ukuxhalela ukuphakama kwawo. Oku Unga amanqaku kubo umhla loo ntombazana ende lowo ikho, kodwa andizange ndicinge ukuba aphume nawo ngenxa yobude yabo.
Ewe, amantombazana abade kufuneka ndincume ke njengokuba naye ndinezinto ezimbalwa ukufunda ngokwabo. Ndithandana mfo elifutshane akukuniki lungelo ukutyhala ukuswela kwabo ubude ezantsi umqala wabo. Nika mfo ikhefu, yayo nzima ngokwaneleyo ekubeni tiptoe ukuze akunike ngokumanga!
Tall, mnyama, yaye eyinzwana Akunyanzelekanga ukuba ngekhomyutha. Kangangoko umphakamo mhle, kufuneka kube yeyonanto ukuba kukho iimpawu ukuba nomtsalane ngakumbi.
Musa ga ukuphakama, mhla umntu! Kuyinto kunokwenzeka ukufumana mfo lowo mde, kodwa ubuntu okanye isimo olulingana ertyisi. Njaloke amantombazana. Ukuphakama kufuneka yimpembelelo engephi kuphela, akukho yeyonanto. Ukuba ubani kwenzeka ukuba uthandana ukuphakama bazolulela umntu, kuhle yaye kulungile. Ukuba akukho njalo, ke nangoku kakuhle kwaye kulungile.
Kuba abo babeka ukuphakama njengoko ophambili xa ekhangela nemihla, ngoko ke kufuneka acinge bona kuqala njengoko mhlawumbi kuba abo kunye nengxaki. Ukuphakama ezingenakulawulwa, kodwa isimo. Mhlawumbi le ndlela kuphela ukuba le ngcamango amantombazana ende kunye guys ezimfutshane demystified.